"စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးထင်သည်မှားယွင်းနေသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်" - မှတ်ချက် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Johann Hari ၏ပြောဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အမှန်တကယ်သိရန်လိုအပ်သည်
အဆိုပါ လူကြိုက်များ Kurzgesagt - တစ် Nutshell ဗီဒီယိုထဲမှာ, ပေါ်အခြေခံကာ Johann Hari ၏ TED ဟောပြောချက်အလွန်ကောင်းသောအချက်များကို၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုမှန်ကန်စေသည်။ ပထမဦးစွာလူ့ချိတ်ဆက်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမှန်ပင်များအတွက်သာယာဝပြောရေးမှအဓိကပံ့ပိုးများမှာ အားလုံး ကို။
မျိုးစိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ရှိုင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးသောဆက်သွယ်မှုအတွက်ဓာတုဗေဒနှင့်အပြုအမူနှစ်ခုစလုံးကိုသတိမရှိသောလှုံ့ဆော်မှုမှရှောင်ရှားရန်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားရာဇ ၀ တ်သားများကဲ့သို့မဆက်ဆံသင့်ပါ။ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည့်မကြာခဏနာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ခြင်းကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုလေ့ကျင့်သင့်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများလေ့လာခြင်း၏ရောဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့် တွဲဖက်၍ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေသော်လည်းဆက်လက်အသုံးပြုနေသည်။
သို့သော်စွဲလမ်းသူများအားသနားကြင်နာစွာဆက်ဆံရန်ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဟီရီ၏အသနားခံချက်ကသူ၏စွဲချက်သည်သိပ္ပံပညာ၏ထူးခြားချက်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်ဤအချက်များကိုလျစ်လျူရှုထားကြောင်းဖော်ပြခြင်းမရှိချေ။ Hari သည်စွဲလမ်းမှုအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ခိုင်မာသောသုတေသနပြုမှုများကိုတောင်မှလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်ထုတ်ပစ်ခြင်းမရှိဘဲသူ၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အခြားသူများကမူ Hari ၏ပြောဆိုချက်များ၏အားနည်းချက်များကိုလေးနက်စွာဖြေရှင်းခဲ့ကြသည် ဆေး အသုံးပြုမှု (ဓာတုစွဲ) ။ ကြည့်ရှုရန်“4 အရာ Johann Hari စွဲအကြောင်းမှားလာ"(အဆိုပါ Fix) နှင့်"စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသမျှအရာအားလုံးမှားသည်"(Reddit) ။ ဤဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအထွေထွေသတင်းအမှားအချို့ကိုပြုပြင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝင်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည် supernormal ဗားရှင်း သဘာဝကဆုလာဘ်၏။
ဗီဒီယိုသည်ကောက်ရိုး - လူအကြောင်းပြချက်ဖြင့်စတင်သည်။ အကယ်၍“ စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာမှန်သည်” ဆိုပါကဆေးရုံ၌ဘိန်းဖြူပေးထားသောလူတိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ တကယ်တော့ဒီစွဲချက်မရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မှမယုံကြဘူး။ သုတေသီများကသုံးစွဲသူများ၏ ၁၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုစွဲစေကြောင်း၊ လူသားမြားသညျ နှင့် တိရစ္ဆာန်များ။ Hari ၏မှားယွင်းသောယူဆချက်အရအထီးကျန်လှောင်ထားသောကြွက်တိုင်းသည်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ကိုကင်းကိုသုံးစွဲလျှင်စွဲလမ်းစေသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါက ၂၀% နဲ့တူတယ် 2010 လေ့လာမှုထုတ်ဖော်ပြသ (အတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့ဘိန်းဖြူနှုန်းထားများနှင့်အတူ):
"၏ဇွန်လ 25 ထုတ်ဝေအတွက်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခု သိပ္ပံသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အမြိုးမြိုးကိုကင်းတဲ့ Coke IV ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆေးများဖို့ကြွက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကိရိယာဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်ပူးတွဲ။ တစ်လပြီးနောက်သုတေသီများကြွက်စွဲ၏အမာခံနိမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးအပေါ်ချိတ်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့သောဖော်ထုတ်စတင်ခဲ့ပြီး: အခက်အခဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရပ်တန့်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်; အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်မြင့်မားတဲ့လှုံ့ဆော်မှု; နှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်များ၏ ၂၀ ရာနှုန်းသာစွဲလမ်းမှုလက္ခဏာသုံးမျိုးစလုံးကိုပြခဲ့ပြီး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကမူအဘယ်သူမျှမပြခဲ့ပါ။ ”
စွဲ 20% နှင့်စွဲမဟုတ်သော 80% အကြားခြားနားချက် lousy မိဘအုပ်ထိန်းသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့လူနေမှုအခြေအနေများမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ၎င်းအစားကြွက်များ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောမျိုးရိုးဗီဇဟောင်း (သို့မဟုတ်အက်ပီဂျင်နစ်) ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆောင်းပါးက
“ အစပိုင်းမှာတော့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဆုလာဘ်တုတုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှုတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းစဉ်သုံးစွဲသူတိုင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ သင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသောက်လျှင်၊ သင်ပိုမိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကင်း၏န့်အသတ်ထောက်ပံ့ရေး။ ကံကောင်းတာကအများအားဖြင့် ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်လေ့လာသည်။ စွဲ ဦး နှောက်, ဤမျှလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့၏စွဲလမ်းမှုမရှိသော furry သူငယ်ချင်းများနှင့်မတူဘဲစွဲလမ်းနေသောကြွက်များ၏ ဦး နှောက်သည်လုံလောက်သော“ ပလပ်စတစ်” ကင်းမဲ့ပြီး ဦး နှောက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် - သူတို့၏အလေ့အထကိုကိုင်တွယ်ရန်။ ဤကြွက်များသည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုဘောင်အတွင်း၌ရှိနေပြီး၎င်းနှင့်အတူစွဲလမ်းနေသောအောက်ဖက်သို့လွင့်မျောနေသောအရာများရှိနေသည်။ ”
စကားမစပ်၊ ၁၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်သုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အခြေအနေများအတွက်နှုန်းထားများဖြစ်ပြီး၊ “ မြင့်” နှင့်သုံးစွဲမှုအကြားဆက်သွယ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ နာမကျန်းဆေးကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်ဆေးရုံများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ နာကျင်မှုကိုယ်တိုင်ရှိနေခြင်းကအားဖြည့်မှုကိုအားနည်းစေသည် (အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်း၏ opioids ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်“ မြင့်မားသော” ဆေးသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိသော) ။
၁၀-၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသောစွဲလမ်းမှုမှချွင်းချက်မှာနီကိုတင်းဖြစ်သည် အများဆုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူမှုရေးအရပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး၎င်း၏ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာအားနည်းမှုနည်းပါးသည် (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တူသောလက္ခဏာများ) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမေရိကန်လူမျိုး ၅၀% နီးပါးသည်ဆေးလိပ်သောက်သူများဖြစ်သည်။ နီကိုတင်းစွဲစွဲသူအားလုံးသည်တွဲဖက်မှုပြissuesနာများရှိခဲ့ပါသလား။ ဤဆေးလိပ်သောက်သူအားလုံးသည်အထီးကျန်ခဲ့ကြပါသလော။ ယနေ့တွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတော်လေးပျော်ရွှင်ပြီးအောင်မြင်သောအမေရိကန်လူမျိုးသန်းချီရှိသည်။ သို့သော်ဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်ပါ။ ဤသည်တစ် ဦး တည်း Hari ရဲ့ရဝုဏ်ကိုပယ်ချ။
အဆိုပါ 10-20% စွဲနှုန်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နေချိန်မှာကျနော်တို့ကသဘာဝဆုလာဘ်၏ supernormal ဗားရှင်း (အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, junk အစားအစာ) အသုံးပြုသူတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းချိတ်နိုင်ပါသည်။ မြင်ရပါလိမ့်မည် ဥပမာအားဖြင့်, သကြားနဲ့ကိုကင်းများအကြားတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးသော, ကြွက်များ၏ 85% မွှေးပစ္စည်းပစ္စယစားရန်ကိုကင်းကိုစှနျ့လှတျ။ ဒီလေ့လာမှုကနေ:
လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်းစမ်းသပ်မှုများအားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အရယခင်ကကိုကင်းသုံးစွဲမှုသည်မည်မျှပင်လေးလံသည်ဖြစ်စေကြွက်အများစုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုအလွယ်တကူစွန့်လွှတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ လူနည်းစုသာလျှင်ယခင်သုံးစွဲခဲ့သည့်အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်တွင် ၁၅% အောက်သာရှိသော်လည်းဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးသဘာဝသကြားကိုကမ်းလှမ်းသည့်တိုင်ကိုကင်းကိုဆက်လက်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ”
အကယ်၍“ Nutshell in” ကြည့်ရှုသူများသည်အမှန်တရားကိုပြောလျှင်ကြွက်လူနည်းစုသာမူးယစ်ဆေးစွဲသူများဖြစ်လာကြလိမ့်မည်ဆိုပါက Hari ၏သတင်းစကားသည်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအများစုကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
Hari က 1979 ၀ ံဂေလိတရားအဖြစ် ၁၉၇၉“ Rat Park” စမ်းသပ်မှုကိုယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုသည် အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများပွားပျက်ကွက်။ ဒီတော့လုပ်နေမှာတော့ Hari လည်းနီးပါးကိုလျစ်လျူရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ် စွဲမှ neuroscience ၏ 40 နှစ်ပေါင်း, အရာကျွန်တော်စွဲလမ်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်ယင်းအပြုအမူများအတွက်အကောင့်အကြောင်း, ဆယ်လူလာမော်လီကျူးများနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတွေဟာ တစ်ခုတည်းမော်လီကျူး၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့် (DeltaFosB) ကြွက်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် junk အစားအစာတပ်မက်စေသည်။ ဒီတူညီတဲ့ဆုလာဘ်-စင်တာမော်လီကျူးပိတ်ဆို့ခြင်း တားဆီး စှဲမွဲမှု ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်။ အလားတူပင်လူသားများအတွက်, (ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူ) တက်ကြွသောကိုကင်းစွဲခဲ့ DeltaFosB ၏သညျ့မြင့်မား သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက် '' ဆုလာဘ်စင်တာများအတွက်။
ပို. ပင်ပြောရာမှာ, ဦးနှောက်-scan ကသုတေသနတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးမျိုးသောစွဲ-သွေးဆောင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (ပြန်သွားကြသည်မည်သူရဲ့အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းပေးပို့1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) ။ တကယ်တော့ Hari ၏ပြောဆိုချက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်။ အောင်မြင်မှု (သို့) ပြန်ဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ခုတည်းသောတသမတ်တည်းအချက်များကအချို့သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုပမာဏဖြစ်သည်။ မှ တစ် အဆိုပါလေ့လာမှု:
"ER-fMRI အချက်အလက်များကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောပုံစံများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစိတ်ရောဂါ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မိသားစုသမိုင်းတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုမှရရှိသောအခြားမည်သည့်အတိုင်းအတာထက်မဆိုပိုမိုမြင့်မားမှုကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ "
စွဲလမ်း၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းလူ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်လျှင်ဘယ်လိုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည်နည်း
ဤဆောင်းပါး၏ရေးသားသူ "ဗီယက်နမ်ဘိန်းဖြူသုတေသီစွဲ၏အကြောင်းရင်းများတွင် Johann Hari ရဲ့ယူရသဘောမတူဖူးနိုင်ပါစေ"Hari ၏ပြောဆိုချက်ကိုထပ်မံဖျက်သိမ်းသည် (သူနောက်ဆုံးတွင်စွဲလမ်းမှုသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မတူညီသောအမြင်ဖြစ်သည်) သူကထောက်ပြသည်မှာဘိန်းဖြူသည်စျေးပေါ။ ဗီယက်နမ်တွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်စစ်သား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ပထမအပတ်အတွင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် 1974 လေ့လာချက် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်များပြားလှသည်မဟုတ်ကြောင်းသတင်းများက
၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်ဗီယက်နမ်မှအမေရိကန်သို့ပြန်လာသည့်စစ်သားစုစုပေါင်း ၁၃,၇၆၀ ခန့်ခန့်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၃,၇၆၀ ခန့်ရှိသည့်လူ ဦး ရေ၏ ၁၃,၇၆၀ တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၄၀၀ ခန့်သည်ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ဆီးကိုအကောင်းမြင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြန်လာသည့်စစ်သား ၁၀% သာဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုအတွက်အကောင်းမြင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၄၀၀ အားလုံးသည်ဘိန်းဖြူစွဲသူများမဟုတ်ကြချေ။ အထူးသဖြင့်အချို့သောသူများသည်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသောအခါ။ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသောဆေးစွဲမှုသည်အမေရိကန်လူ ဦး ရေ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်တို့အတွက်လက်ရှိစွဲလမ်းမှုနှုန်းအောက်တွင်ရှိသည်။
ကြောင့်ဗီယက်နမ်၏စိတ်ဖိစီးမှုမှကျယ်ပြန့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းရှိခဲ့သည်သို့မဟုတ်ကြောင့်စျေးပေါဘိန်းဖြူရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းဖို့ခဲ့သလဲ တစ်ဦးက သော့ချက်တွေ့ရှိချက် နောက်ဆုံးမှာဘိန်းဖြူစွဲဖြစ်လာခဲ့ဘူးသူစစ်သားအများစုအားကြီးသောအကြံပြုသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်သမိုင်းနဲ့ခဲ့ခဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအစိတ်အပိုင်း ဒီစစ်သား '' စွဲဘို့။ သုတေသီက
၀ န်ဆောင်မှုမ ၀ င်မီအသုံးပြုသောမူးယစ်ဆေးဝါးမျိုးကွဲများများလေလေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်ဗီယက်နမ်တွင်ပိုမိုများပြားလာလေလေဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ဖိစီးမှုခဲ့လြှငျ, အဘယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာစွဲဖွစျလာသူလူတို့သညျယေဘုယျအားဖြင့်စောစောပိုင်း၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်၌မိမိတို့ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်း start ခဲ့ပါ, ရှေ့မှာ တိုက်ခိုက်ရေးထိတွေ့ခံရ? အဘယ့်ကြောင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းသည်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့သနည်း။ သုတေသီကပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပိုမိုတက်ကြွသောတိုက်ပွဲများကိုမြင်သူများသည်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မြင်တွေ့ရသောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများထက် ပိုမို၍ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ”
ဒါကြောင့်သူတို့ကပြန်အိမ်ပြန်ရောက်တော့တဲ့အခါမှာအများဆုံးဘိန်းဖြူ-သုံးပြီးစစ်သားရပ်တန့်အံ့သြစရာရှိပါသလား? ဘိန်းဖြူမကြာခဏရဖို့ခဲယဉ်းအကုန်အကျဖြစ်ပြီး, အရပ်သားဘဝနှင့်အတူနှောင့်ယှက်: စသည်တို့ကို, အလုပ်ရှာဖွေတာအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးသက်တမ်းတိုး
Hari ၏ပစ္စည်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဖိုရမ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာတုန့်ပြန်မှုရရှိခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည်၎င်းတို့၏ဖန်သားပြင်ကိုအလွန်စွဲလန်းကြပြီးလူမှုရေးအရအထီးကျန်သည်ဟုခံစားကြရသည်။ Hari ၏ယူဆချက်ကသူတို့၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအားလူ့ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းကိုဖော်ပြရန်အားပေးသည်။ သို့သော် Hari သည်အချက်အလက်များ၏အဓိကအပိုင်းကိုလုံးလုံးလျားလျားလွဲချော်သွားသည်၊ အလှည့်တွင်အင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်အဓိကမျက်စိကန်းသောနေရာတွင်ကျန်နေသည်။
လူ့ကွန်နက်ရှင်နဲ့စွဲအကြားဆက်ဆံရေး နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများဝင်မဟုတျဘဲတလမ်းတည်း။ ချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှဆေးလိပ်ဖြတ်သူမြားစှာယောက်ျားတွေ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့်, နှင့်သောသူတို့သည် လူမှုရေးသံလိုက်ဖြစ်လာ သူတို့ရပ်တန့်တစ်ကြိမ်။ အထီးကျန်စွဲ, စွဲလမ်းကိုယ်နှိုက်ကနေတဆင့် Self-ဆေးဝါးမောင်းနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ဒါကဖြစ်ပါသည် impedance ဆက်သွယ်မှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ mutes ။ စွဲစေသည့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြင့်တွဲဆက်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) အထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိဟုသုံးစွဲသူသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်သိရှိထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အပြုအမူများနှင့်မတူပါ။
ထပ်ခါထပ်ခါကျနော်တို့အစီရင်ခံစာထွက်သူကိုယောက်ျားတွေသူတို့တခြားသူတွေနဲ့နှင့်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူအများကြီးပိုနက်ရှိုင်းစွာချိတ်ဆက်နိုင်ဖြစ်လာကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ တချို့ကတောင်မှသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိ extroverts မဟုတ်ဘဲလူကန်လန်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က မကြာခဏအံ့သြ ဘယ်လောက်ထက်ပိုပျော်စရာမှာသူတို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်တွေ့ပါ, တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပင်လိင်စဉ်အတွင်းသူ့ဟာသူအထွတ်အထိပ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့က overstimulation ထံမှ abstinence တဲ့ကာလလိုအပ်ပါတယ် ရှေ့မှာ သူတို့ကအပြည့်အဝဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများကနေအကျိုးရှိနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ် ရေချိန်ပြန်လည်ညှိဖို့အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ Hari ဒီလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်မထားဘူး။
သဘာဝကဆုလာဘ်များ supernormal ဗားရှင်း၏တန်ခိုး
Hari ၏သတင်းစကား၏အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုမှာ“ တစ်စုံတစ် ဦး သည်လူမှုပတ် ၀ န်းကျင်ကောင်းတစ်ခုထားရှိလျှင်သူ / သူမသည်စွဲလမ်းရန်အန္တရာယ်မရှိဘဲစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်” ဖြစ်သည် ၎င်းသည်စွဲလမ်းစေသောအရာဝတ္ထုများသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကဲ့သို့တလွဲထင်မြင်ယူဆနိုင်သည်။ ပျော်ရွှင်စွာပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်များပြားလှသောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများရှိခဲ့သည့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောသုံးစွဲသူများစွာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ပြီးသောယောက်ျားများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လူမှုရေးဆက်သွယ်မှုကောင်းသူများအတွက်ပင်အဘယ်ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းကိုအနီးကပ်ကြည့်ကြပါစို့။
မူးယစ်ဆေးဝါးများပြန်လည်စဉ်းစားရန်ခဏ Back up ။ “ မြင့်မားသော” ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာဆိုးရွားသည်။ များစွာသောသူတို့သည်သတိပြောင်းလဲခြင်း၊ မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစားထိုးရန်အားနည်းနေသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတော်များများသည်အစားအစာ၊ လိင်၊ နှောင်ကြိုး၊ အောင်မြင်မှု၊ ကစားခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းအတွက်အလင်းရောင်ရရန်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ ဦး နှောက်ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသောစစ်မှန်သောဆုလာဘ်ဖြစ်ကြောင်း Hari ကအသိပေးသော်လည်းသူသည်ဤအခြားသဘာဝဆုကျေးဇူးများကိုလျစ်လျူရှုသည်။ စိတ်ပညာရှင် Stanton Peele ကဤအချက်ကိုထောက်ပြခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post::
“ Rat Park သည်ဂန္တ ၀ င်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က morphine ဖြေရှင်းချက်ကိုလေ့ကျင့်ထားသောကြွက်များသည်၎င်းကိုသီးခြားအိတ်များ၌ရေဖြင့်ဆက်လက်သောက်သုံးရန်ပိုမိုနှစ်သက်သော်လည်း၊ နှစ် ဦး စလုံးလိင်အများအပြားကြွက်။ ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိင်ကိစ္စကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းထက်လျင်မြန်စွာ ဦး စားပေးသည် - ဆိုလိုသည်မှာလိင်ကြွက်အဘို့အမူးယစ်ဆေးဝါးများထက် သာ. ကောင်း၏။ "
မဟုတ်သလို Hari သူ၏ကြည့်ရှုရန်ရှင်းပြထားဘူး supernormal ဗားရှင်း သဘာဝကဆုလာဘ်များ (ဥပမာ, junk အစားအစာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခေတ်သစ်) ပို. တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှစျလိုဖှယျနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ထက်ဖြစ်ကြသည်။ Supernormal လှုံ့ဆော်မှု ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှု၏ပုံကြီးချဲ့ဗားရှင်းသော်လည်း, မဟုတ်မမှန်ပိုပြီးအဖိုးတန်အဖြစ်သူတို့ကိုရိပ်မိရ။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြကူညီပေးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်များ၏ 35% အဝလွန်ဖြစ်ကြပြီး 70% အဝလွန်နေကြသည်သူတို့ထဲကဘယ်သူမှဖြစ်လိုသော်လည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ဆားကစ်တက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာဂါ၊ ကြော်နှင့် milkshakes တို့တွင်ကယ်လိုရီ ၁၅၀၀ ကိုအလွယ်တကူကျဆင်းနိုင်သည်။ တစ်နေ့တည်း (သို့မဟုတ်တစ်နေ့တွင်) ခြောက်သွေ့နေသောပီကေနှင့်အသားပြုတ်ဓာတ် ၁၅၀၀ ကယ်လိုရီကိုဖြိုချရန်ကြိုးစားပါ။
အများအပြားကတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ (junk အစားအစာကိုကင်းထက်ပိုစွဲလမ်းကြောင်းပြသကြကြွက်များကိုကင်းမှသကြားကိုပိုနှစ်သက်) နှင့်အဝလွန်ခြင်းမှ overeating အကြောင်းကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ အမှန်မှာကြွက်များကို“ ကဖေးအစားအစာ” ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခွင့်ပေးသောအခါ အဝလွန်ခြင်းနီးပါး 100% မူးရူး။ အဝလွန်ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ထင်ဟပ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဒီကြွက်တွေဟာပုံမှန်ကြွက်တွေကိုသိပ်မစားကြဘူး။
ဒီအခြားသောလမ်းပြော, ဘိန်းဖြူ, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ကင်းရှာကြံမပင်ဆားကစ်ရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုထုတ်ရှာကြံနှင့်အစားအစာနှင့်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစားသုံးရန်ကျိန်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဆားကစ်ရှိပါတယ်။ ထိုအကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးမုန့်ညက်, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်လွှတ်ပေးရန်ကြိုက်တယ်စဉ် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို အာရုံ neurochemicals (dopamine နှင့် opioids) ၏။ ဒါကဖြစ်သင့်သည် - မျိုးပွားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇနံပါတ် ၁ အလုပ်ဖြစ်သည်။
ကြွက်ကသာလူနည်းစုမူးယစ်ဆေးစွဲဖြစ်လာစဉ်တွင်; 100% ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှ copulate
သင်တစ်ဦးလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်နဲ့လှောင်အိမ်သို့အထီးကြွက် drop တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ ပထမဦးစွာသင်သုတ်ရည်ထိတဲ့စိတ်ပြင်းထန်ခြင်းကြည့်ရှုပါ။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းသောအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီး၏ယောက်ျားကိုတာယာ။ သူမပိုပြီးလိုလားရင်တောင်သူအတွက်လုံလောက်သောရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သောတဦးတည်းနှင့်အတူမူလအမျိုးသမီးကိုအစားထိုးလျက်, အထီးချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာတာကိုနှင့် gallantly fertilize ကြိုးစားနေရဆဲ ဒီမှာ။ သူကလုံးဝထွက်သုတ်သည်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုလတ်ဆတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်အတူဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
ဒါကဟုခေါ်သည် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်မှဖွအလိုအလျောက်တုန့်ပြန်။ ဘယ်လိုဤတွင်င် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုအကျင့်ကိုကျင့်: အဆိုပါကြွက်ရဲ့ ဆုလာဘ် circuitry စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော Neurochemicals (dopamine and opioids) ထုတ်လုပ်မှုကိုလက်ရှိအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထုတ်လုပ်သည်၊ သို့သော်အမျိုးသမီးအသစ်အတွက်အကြီးအကျယ်မြင့်တက်နေသည်။ သူ၏မျိုးရိုးဗီဇသည်သူမအမျိုးမဖျားမကျန်ရစ်စေရန်သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရန်သေချာစေလိုသည်။
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကြွက်နှင့်လူသား ဒါမတူဘူး အခါ t ကိုကြွလာဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဏတုံ့ပြန်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါ, သြစတြေးလျသုတေသီများ (ဂရပ်) သည်တူညီသောခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ရှင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ စမ်းသပ်သူများ၏ပြစ်ဒဏ်များနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ဌာန်ကျသောအစီရင်ခံစာများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတိုးတက်လာခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ The“တူညီတဲ့အဟောင်းတူညီတဲ့အဟောင်း"ပဲပျင်းလာတယ်။
18 ရှုခင်းများရုံပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များ Off-သုတေသီများ 19 များအတွက်ဝတ္ထု erotica မိတ်ဆက်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်th နှင့် 20th ရှုမြင်ကြသည်။ ဘင်ဂိုကစား! အဆိုပါဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ penises အာရုံစိုက်မှုမှပေါ။ (ဟုတ်ပါတယ်, အမျိုးသမီးတွေအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသ.)
ဟုတ်ပါတယ်, ဆန္ဒရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဆုံးမဲ့ချီတက်ပွဲကြုံနေရတစ်အထိုင်များနို့တိုက်သတ္တဝါတစ်ဦး Lab ထဲမှာမဟုတ်, သဘောသဘာဝတွင်သာဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ပါကအလိုတခုတည်း?
တစ်ဦး supernormal လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖြစ်ပါသည် အကျိုးကို circuitry ဖို့အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်း ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအဆုံးမဲ့ချီတက်ပွဲကိုကမ်းလှမ်းလို့ပါ။ ၎င်းသည်“ အိမ်ထောင်ဖက်”၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင်ကွင်း၊ ထူးဆန်းသောလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုဖြည့်နိုင်သည်။ Tab များဖွင့်ပြီးနာရီကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုသူသည်တစ်သက်တာတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းသောဘိုးဘေးများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အသစ်များပိုမိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။
အင်တာနက် porn နှင့်အတူ, ဒါဟာအဆုံးမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး သစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကအသံမြည်မယ်။ အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု ကဲ့သို့ စိုးရိမ်ခြင်း, ထိတ်လန့်သို့မဟုတ် အံ့သြစရာ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ် circuit ကိုထွန်းလင်း။ လမ်းထောင့်ရှိဘိန်းဖြူရရှိမှုနှင့်မတူဘဲယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ စားသုံးမှုအကန့်အသတ်ရှိသောအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ဦး နှောက်၏သဘာဝအခြေအနေကိုယန္တရားတစ်ခုကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်အောင်မဖွင့်ပါ။ သို့တိုင်အသုံးပြုသူသည်ထပ်မံနှိုးဆွရန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမတူဘဲ, porn အသုံးပြုမှုကိုယခုကျယ်ပြန့်သည် ဖြစ်. , နီးပါးတစ်လောကလုံး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အထီးအကြား။ ထို့အပြင်အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကို“ ကျန်းမာခြင်း” နှင့်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ခြင်း” ၏ပုံမှန်အပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ယနေ့လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (အားလုံး ယနေ့အထိထုတ်ဝေ neuroscience-လေ့လာမှုများ အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့။ )
အဘယ်သူမျှမစွဲကျွမ်းကျင်သူသူသည် Hari - ဝန်ခံမထားဘူး အဆိုပါကြီးထွားအားနည်းချက် အတော်လေးမပါဘဲလူမှုရေးချိတ်ဆက်မှုဒီဂရီကနေတည်ရှိရာစွဲလမ်းတ္ထုများနှင့်အပြုအမူဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, လေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အဘို့, မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး ပို. အပြီးအပိုင်ကြောင်းပြသ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်သည်ထက်ထိခိုက်.
porn-သွေးဆောင်၏အန္တရာယ်ဖြစ်သကဲ့သို့ထို့အတူအမျိုးမျိုးစွဲလမ်းသို့ကျသွား၏အန္တရာယ်, ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များအတွက်အနိမ့်အလိုဆန္ဒ၏နှုန်းထားများ ဒီနေ့လူငယ်များအတွက်မြင့်တက်နေကြသည်။ တစ်ဦးက ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ ဦး နှောက် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာ dopamine ထုတ်လုပ်မှု နှင့် neuroplasticityဒါကြောင့်အောင် စွဲဖို့အလွန်အမင်းအားနည်းချက် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။ မြီးကောင်ပေါက်တိရိစ္ဆာန်များထုတ်လုပ် DeltaFosB ၏အဆင့်မြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုယခုကြှနျုပျတို့ရှိနာတာရှည်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တွေဟာအချိန်ကာလအတွင်းတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု supernormal လှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. မြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ပါသည် လိင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို rewiring။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ခုမှာအဓိကရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာနောက်ပိုင်းမှာမျိုးပွားနိုင်ရန်အတွက်လိင် (သတိရှိရှိနှင့်အစဉ်မှာ) အကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, အရှင်နိုင် ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ပနျးပုထု ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းသည်အလွန်လူမှုရေးစွမ်းရည်များကိုလေ့လာခြင်းမှအာရုံလွဲသွားစေသည် ကျနော်တို့ချိတ်ဆက်မှုအတွက်လိုအပ်.
Hari ၏ကာတွန်းသည်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေသည်ဆိုသောကောင်းသောလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်သည်စွဲလမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့စူပါအထိခိုက်မခံတဲ့ ဦး နှောက်ရှိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်ဒါဟာမမှန်ပါဘူး။ အဖြစ် ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ် ဂါယူဆပါသည်ထောက်ပြအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ:
Rat Park ရှိကြွက်များသည်ဘိန်းဖြူအစားလိင်မှုကိစ္စပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်မရှိသောသန်းပေါင်းများစွာသောအမျိုးသမီးကြွက်များကိုအင်တာနက်ကိရိယာများတွင်“ fertilize” လုပ်နိုင်သည်။